Xeerka ilmaha la iska soo rido oo marmar muran dhaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
JO oo dawladda ku boorisay in xeerka ilo iska soo ridka lagu sameeyo dib u eegis. sawir: Luis Hidalgo/AP
Xeerka ilmaha la iska soo rido oo marmar muran dhaliya
La daabacay torsdag 19 september 2019 kl 08.00
Xeerka ilmo iska soo ridka ee dalka u degsan ayaan ahayn mid qeexan (kala cad), sida uu aaminsan yahay guddi-baarlamaanka caddaaladda oo magaciisa loo soo gaabiyo - JO oo dhowaantan baaris ku sameeyay arrinkaa.
Dabadeed kolkii ay u caddaatay in siyaabo kala duwan looga macneeysto goobaha dar yeelka caafimaad iyo hayadaha kala duwan.
Madaxa guddiga cadaaladda baarlamanka Elisabeth Rynning ayaa u soo ban dhigtay in dawladdu dib u eegis ku sameeyso xeerka kala haga iska soo rididda ilmaha.
– Waxaa baaristayda ka muuqatay in qodobbo dhowr ah oo xeerka ka mid ah loo kala macneeysto siyaabo kala duwan tusaale ahaan kolka laga hadleyo xilliga dambe ee ilmaha la iska soo rido, ama ridi karo, sida ay sheegtay mar ay wareeysi siisay Ellinor Knoxborn oo ka howlgasha laanta wararka Ekot.
Baarista xeerka ee guddiga ayaa ka dambeeysay kolkii ey cabashooyin kala duwan ka yimaadeen habka loo maareeyey ilamo la iska soo ridey kadib toddobaadka 18-naad ee uurka. Dhibaatooyinka ka aloosma ayaa salka ku haya wakhtiga yar ee u dhexeeya toddobaadka ugu dambeeya ee xeerku ogol yahay in ilmaha la iska soo ridi karo sabab la’aan iyo toddobaadka 21-naad oo loo baahan yahay in ogolaansho gaar ah laga haysto hayadda hoggaanka bulshada, kuna beegan xilli wixii ka dambeeya ay uur jiiftu dibadda ku badbaadi karto , waana toddobaadka 22-naad.
Madaxa guddiga cadaaladda baarlamanka Elisabeth Rynning iyo mar kale:
– Waa mid ay ka muuqatay afkaar kala duwan ee la xiriira tallaabada ey tahay iney qaadaan howl wadeennada caafimaadku kolka ey uga muuqato astaamo nololeed uur jiif xilligii dambe la soo tuureyo. Sidee haddaba loo maareeyn uur jiiftaa?. Xagguu yaalaa xadka u dhexeeya xeerka ilmo iska soo rididda iyo xeerarka kalee caadiga ah ee u degsan ama ku dhaqmaan howl wadeennada dar yeelka caafimaad?. Sidoo kale waxaa laga hadleyaa habkii loo macneeyn lahaa goorta nolol la qabo, maxaa loola jeedaa, goormaase la xisaabin in ilamah la soo ridey? Ma marka howsha ilmo rididda la bilaabaa, mise waa markii laga fara xashay, laga yaabee inay maalmo dabadeed tahay?, sida ay sheegtay madaxa guddiga shuruucda baarlamanka – JO Elisabeth Rynning.